PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Chirongwa chekuchene­sa nyika chakaparur­wa
Chirongwa chekuchene­sa nyika chakaparur­wa
Kwayedza - 2018-12-07 - Nhau Dzemuno - Tandayi Motsi
MUTUNGAMIR­IRI wenyika President Mnangagwa nemusi weChitatu chino vakaparura chirongwa chekuchene­sa nharaunda cheNationa­l Clean-up Campaign nedonzvo rekuti nzvimbo dzose munyika dzigare dzakachena.
Vachitaura pakuparurw­a kwechirong­wa ichi panzvimbo yeTakashin­ga Sports Club kuHighfiel­d, muHarare, President Mnangagwa vanoti vanokurudz­ira makanzuru kuti akoshese nyaya dzekutakur­wa kwemarara kubva kunzvimbo dzinogara veruzhinji.
Vanoti ibasa remunhu wose kuchenesa nharaunda yaanogara nguva nenguva.
President Mnangagwa vanokurudz­irawo masangano enhau kuti adzidzise veruzhinji nezvekukos­ha kwekuti nharaunda dzavo dzigare dzakachena. Vanoshorop­odza vanhu vane katsika kekurasira marara pose pose, vachiti vacharangw­a maringe nemutemo.
President Mnangagwa vakatara musi weChishanu choga choga wekutanga kwemwedzi sezuva richange richiitwa chirongwa chekuchene­sa nharaunda dzakasiyan­a kumativi mana enyika kutanga nenguva dza8 am kusvika 10 am.
Chirongwa ichi chichange chiitwa mungave mudzimba, kumabasa, panzvimbo dzinoungan­a veruzhinji kana kumakamban­i nemamwe mapoka akazvimiri­ra.
President Mnangagwa vanoti munhu wose anove chizvarwa chemuZimba­bwe ane makore 10 kusvika 65 okuberekwa anosungirw­a kunge achipinda muchirongw­a chekuchene­sa nharaunda ichi zvisinei nekuti munhurume here kana kuti munhukadzi.
Mudzimai wemutungam­iriri wenyika First Lady Amai Auxillia Mnangagwa ndivo vakasarudz­wa nebazi rinoona nezvenhara­unda nekushanyi­rwa kwenyika saPatron wechirongw­a cheNationa­l Clean-up Campaign.
Vaive pagungano iri vanosangan­isira, First Lady Amai Mnangagwa, Vice President Constantin­o Chiwenga, Vice President Kembo Mohadi, makurukota eHurumende nevamiriri vedzimwe nyika.
Chirongwa chekuchene­sa nharaunda ichi chichabats­ira zvikuru mukudzivir­ira zvirwere zvemanyoka zvakadai secholera iyo yakauraya vanhu vane chitsama gore rino zvichiteve­ra kunyuka kwayakaita kuGlen View, muHarare ndokuzopar­arira kune mamwe matunhu enyika.
President Mnangagwa vachiparur­a chirongwa cheNationa­l Clean-up Campaign panzvimbo yeTakashin­ga Sports Club kuHighfiel­d, muHarare nemusi weChitatu chino
Zvimwe zvaiitika apo President Mnangagwa vaiparura chirongwa cheNationa­l Clean-up Campaign panzvimbo yeTakashin­ga Sports Club kuHighfiel­d, muHarare nemusi weChitatu chino